Ezokukhiqiza kanye nokuThengwa - iShandong Huate Magnet Technology Co, Ltd.
Okwakha Izinto Zokusebenza
Njengamanje, isikhungo sokukhiqiza senkampani yethu sinomthamo wokukhiqiza wamasethi ayi-8000 ngonyaka, ngaphezu kwamakhono angama-500 amahle kakhulu futhi abasebenzi abaphezulu bezinga eliphakeme basebenza ezintanjeni zokukhiqiza. Imishini iphelele futhi imishini yokusebenza nokwenza izinto iphakeme. Emgqeni wokukhiqiza, amadivaysi ayisisekelo okuchotshozwa okunjalo, ukugaya nokuhlukanisa uzibuthe akhiqizwa ngokuzimela nezinye izinto ezinanyathiselwe ezifakwe imikhiqizo esemqoka yamabhizinisi aphezulu wasekhaya isikhathi eside, ngokusebenza okuphezulu kakhulu.
Ngohlelo lokuthengwa kwezimpahla oluvuthiwe noluncintisana nabathengisi, i-HUATE MAGNETIC isungule ubudlelwano bokusebenzisana besikhathi eside nabathengisi abanamandla nabanekhono embonini. I-HUATE MAGNETIC ingathenga imishini nezinto zokwakhiwa kwesakhiwo sokuhlomula, kufaka phakathi kepha kungagcini lapho abembi, abalayishi, abasebenza ngezinsimbi zomgwaqo, imishini yokugqoka, amaphampu amanzi, abalandeli, amakhilogremu, izinto ezihambelana nezitshalo, amathuluzi wokufaka nawokulungisa, imishini yelebhu, izingxenye ezisele, okugqokwa kokudliwayo kwezitshalo, izindlu ezisezingeni eliphakathi, ama-workshop wesakhiwo sensimbi njll.
Ukuze uqiniseke ukuthi imishini ingafika esitsheni sokugqoka isesimweni esihle, i-HUATE MAGNETIC isebenzisa izindlela ezi-7 zokufaka njengokupakisha kwe-Nude 、 I-Rope Bundle Packing 、 Ukupakishwa Kwezinkuni 、 Isikhwama se-Snakeskin, I-Airform Winding Packing 、 Ukufakwa Kwamaphakethe Okungena Amanzi Nokupakisha Izinkuni. ukulimala okungenzeka ngesikhathi sokuhamba njengokushayisana, abrasion nokugqwala njll.
Ngokuya ngezimpawu zokuhamba olwandle olude lwamazwe omhlaba nokuhamba ngezinto zasolwandle ngemuva, izinhlobo zokupaka design ngamacala enziwe ngamapulangwe, amabhokisi, izikhwama, anqunu, izikhwebu nokufaka iziqukathi.
Ukuze uthole impahla ngokushesha okukhulu ngesikhathi senqubo yokufaka futhi wehlise umthwalo wokuphaka nokusiza esizeni, zonke izinhlobo zeziqukathi zemithwalo nezimpahla ezinkulu zokupakisha ezinqunu zibaliwe, futhi indawo yemayini iyadingeka ukuthi ilayishwe endaweni ebekiwe ukuze kube lula ukuphatha, ukuphakamisa nokubheka.